Manchester United oo looga digay saxiixyada James Maddison iyo Jack Grealish – Gool FM
Manchester United oo looga digay saxiixyada James Maddison iyo Jack Grealish
(Manchester) 15 Feb 2020. Red Devils ayaa qorsheyneysa inay si lama filaan ah 160 milyan oo ginni ugula soo saxiixato kubad sameeyaha Leicester City Maddison iyo xiddiga Aston Villa Grealish.
Halyeeyga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Paul Parker ayaa digniin u diray macalin Ole Gunnar Solskjaer, taasoo ku aadan raacdeynta James Maddison iyo Jack Grealish.
Inkasta oo ay Bruno Fernandes kala soo wareegtay Sporting Lisbon bishii Janaayo, Solskjaer ayaa doonaya inuu xoojiyo khadkiisa dhexe ee xagaaga, iyadoo Paul Pogba macquul ay tahay in uu ka tago garoonka Old Trafford.
Laakiin Parker ayaa shaki geliyay in Leicester ay iska iibin doonto bar-tilmaameedka Manchester United ee Maddison xagaagan, waxaana uu su’aal ka keenay in Grealish ay soo qaadanayaan.
Xiddiga ku guuleystay labadda jeer horyaalka Premier League ayaa u sheegay wargeyska “Metro” ee dalka England:
“Manchester United waxay u baahan tahay inay la soo saxiixato ciyaartooy la xaqiijiyay laakiin way cadahay inuu [Maddison] ka tegi doonin Leicester City”.
“Ma doonayo inuu ka dhaqaaqo ilaa Leicester City loo soo bandhigo lacag waali ah, sida ay ahaayeen kuwii Harry Maguire. Leicester ma rumeysana nasiibkooda arrinkan”.
“Marka waa inaad qaadataa Maddison oo aad ka tagtaa Grealish laakiin miyey heli karaan heshiiskaas? Grealish aniga ahaan wali waa macquul, waxaa jiray hadalo badan balse ma ahan kuwo si dhab ah u hirgalaya”.
Parker, kaas oo ku guuleystay waayihiisii Old Trafford, FA Cup iyo Leagea Cup ayaa rumeysan in Solskjaer uu u baahan yahay in uu la soo wareego weeraryahan iyo daafac dhexe badalkii uu diirada saari lahaa suuqa xagaaga weeraryahan.
MUUQAAL: Kooxda kubadda cagta Elman oo abaal-marin siisay labo ka mid ah xiddigaheeda